Akụkọ kachasị na'abali a: 'Oke idemmiri na-abịa, kee nkwụcha - NEMA - BBC News Ìgbò
Akụkọ kachasị na'abali a: 'Oke idemmiri na-abịa, kee nkwụcha - NEMA
4 Julaị 2018
'Oke ide mmiri, ke nkwụcha' - NEMA
Onyeisi ndị ụlọọrụ otu gbatagbata nke a kpọrọ 'National Emergency Management Agency' na bekee nke mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ Walson Ibarakumo adọọla aka na nti ka ndị bị na mpaghara ahụ kee nkwucha maka na oke ide mmiri na-abịa.
N'akụkọ nyiri ibe ya, otu a kpọrọ Igbo Environmental Foundation ekwuola na mpaghara ọwụwa-anyanwụ nwere mbize karịrị puku abụọ na narị asatọ nke nwere ike ịchụsa obodo dị iche iche na mpaghara ahụ.
Ha ga-achụda Buhari n'ọkwa?
Ụlọikpe ukwu dị n'Osogbo enyela ụlọomeiwu iwu ka ha bido ozugbo ozugbo usoro ịchụda Muhammadụ Buhari n'ọkwa onyeisiala nke a kpọrọ 'impeachment na bekee.
Oke ogbugbu mmadụ ga-emebiri Buhari ntụliaka 2019 - Ndị Bishop Katọlịk
Ọgbakọ ndị Bishọp ụka Katọlịk na Naịjirịa a kpọrọ, 'Catholic Bishops Conference of Nigeria (CBCN),' ekwuola na nkiti onyeisiala bụ Muhammadu Buhari gbara maka oke ogbugbu ga-emebiri ya ihe na ntụliaka na-abịanụ.
Ndị Nigerianlivesmatter emeela ngagharịiwe n'Abuja
Ndị Katọlik mere ngaghariwe megide oke ogbugbu mmadụ na Legos na nsonso
Ụmụafọ Naijiria na ndị na-alụ ọgụ maka ikike dịrị onye pụtara n'igwe na Unity Fountain dị n' Abuja mee ngagharíiwe iji igosi iwe ha banyere oke ogbugbu mmadụ na-eme n'akụkụ Naijiria dị iche iche.
Sarakị chọrọ ka ụlọomeiwu steeti 36 kwado uweojii steeti
Ebe foto si, @BUKOLASARAKI
Onyeisi ndị omeiwu ukwu bụ Bukola Saraki arịọla ndị ụlọomeiwu nọ na steeti iri ató na isii na Naijria ka ha tinyere aka na ndezigharị iwu ala Naijiria ka e nwe ndịụwe ojii nke steeti.
Emmanuel Macron enyeela Afirika ndụmọọdụ
Onyeisiala mba Fransị bụ Emmanuel Macron biara njem na Naịjirịa ugbua, na-ekwusi ike na ụlọọrụ otu EU ga-emepe na Afríka maka ndị mbiambia ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na gọọmentị ndí mba nó n' Afríka tinye aka na ya bụ ọrụ.
Onweghị ihe gbasara anyị na Kylain Mbappe
Otu Real Madrid ekwuola na akụkọ kwuru na ha ga-azụ ọgba bọọlụ Kylain Mbappe abụghị ezi okwu ncha ncha.
Gee akụkọ anyị ebe a
Lee ihe nkiri anyị
'Ekwere m na 'One Nigeria' ma ụmụ Igbo gaanụ mepe ala Igbo'
Ned Nwoko vs Jaruma: Ụlọikpe atọhapụla Jaruma dịka ọ nọrọ abalị anọ n'ụlọ mkpọrọ
28 Jenụwarị 2022
elekere 3 gara aga
Ecowas ekewapụla Burkina Faso n'otu ha
Afcon 2021: Lee ụmụnwaanyị na-eri ego ndị Super Eagles
20 Jenụwarị 2022
Mba Ghana ga-ewepụ Milovan Rajevac dịka onye nkuzi otu bọọlụ ha
22 Jenụwarị 2022
AFCON 2021 Tournament: Etu Naịjirịa si kwụrụ n'AFCON a kamgbe ọ malitere
9 Jenụwarị 2022
Naijirịa akụnyela Sudan akpụ anya
15 Jenụwarị 2022
Novak Djokovic apụọla na mba Australia ugbua
16 Jenụwarị 2022
Ihe ị kwesịrị ịma maka José Peseiro, onye nkuzi ọhụrụ Super Eagles
Akụkọ na Buhari zọrọ ụkwụ n'elu 'Coat of Arms' Naịjirịa bụ akụkọ nduhie
26 Jenụwarị 2022
Ugboro ole ndị agha wegharala ọchịchị n'ike n'Africa kemgbe 2021
25 Jenụwarị 2022
Gịnị ka ị ma maka Buchi Emecheta, nwaanyị Igbo ji eme ọnụ?
21 Julaị 2019
Onyoonyo ebe ụmụ okorobịa na-anyụ nsị ma na-eri ya n'okporoụzọ ọ bụ eziokwu?
Gịnị ka nnyocha sayensi kwuru gbasara ọgwụ e ji etowanye amụ nwoke?
Onyeisiala Muhammadu Buhari emepere 'Pyramid' osikapa na-achịtaghị aja?
Lee aha ndị ochie kpọrọ obodo ha mgbe gboo tupu akpọgharịa ha
Emelitere ikpeazụ na: 23 Mee 2020
Onyonyo ebe ndị ji egbe na-agba ụmụakwụkwọ ọtọ, abụghị na Naịjirịa ka o mere
Emelitere ikpeazụ na: 21 Julaị 2019
Ekwensu ọ bụ 'satan' n'ala Igbo?
Emelitere ikpeazụ na: 17 Eprel 2020
Onyeisiala Buhari akagbuola njem o kwesịrị ime na Zamfara state